Janardan sharma(Janardan sharma) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई दिए धानको उत्पादन तीन गुणाले बढाउने आइडिया !
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी जेठ–असारमा धान रोप्ने किसानलाई उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय तथा मातहतको गुणस्तर तथा...
अर्थमन्त्रीको प्रश्न-'देशलाई श्रीलंका बनाउनेतर्फ किन चासो भइरहेको छ ?'
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल श्रीलंका हुन्छ भनेर अफवाह फैलाइएको दाबी गरेका छन् । 'देश श्रीलंका हुन्छ भनेर अफवाह फैलाइएको छ ।' यो राष्टघात हो । उनले भने-'श्रीलंका बनाउनतर्फ किन उहाँहरुको चासो भइरहेको छ ? मलाई अचम्म लाग्छ ।' उनले आज(सोमबार) पनि सरकारको टेजरीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको र अवस्था हल्ला गरिएजस्तो नरहेको...
'जथाभावी ऋण प्रवाह हुँदा पनि गभर्नरले आँखा चिम्लिए, मागेको डेटा दिएनन्'
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रबैंक ऐनको प्रावधान अनुसार नै गभर्नरलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिंदै एक महिनापछि सबै कुराको यथार्थ चित्र बाहिर आउने बताए । उनले यो वर्षका लागि...
अर्थमन्त्रीको काउण्टर-'अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको होइन, राजनीतिकरण बढी भयो'
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ताजा तथ्यांक र अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट नआएको देखाउने भन्दै अनावश्यक प्रचारबाजी नगर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको भनेर कुप्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै भने–‘यसमा राजनीतिकरण नगरौं ।...
४-१२ को क्याप हट्नसक्ने, डलर भित्र्याउन पूँजीबजारलाई अर्थमन्त्रीले महत्व दिने संकेत
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाउनुअघि एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनीविरुद्ध आक्रोश पोखे । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २५ गते शुक्रबार काठमाण्डौमा अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमको उद्घाटन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए...
अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको पत्र: ०७९ असारसम्म निजी गाडीको आयात रोक्नुपर्ने, काठमाण्डौमा साताको २ दिन विदा दिनुपर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एक पत्र लेख्दै अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या समाधानका उपायहरुको विषयमा सुझाव दिएका छन् । चैत १६ गतेको मितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई सम्बोधन गर्दै तीव्र दवाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन...
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ८ महिनादेखि बोलचाल बन्द !
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध चिसिएको लामो समय बित्दा पनि सुध्रिन सकेको छैन । यी दुई व्यक्तिबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको छ । एकअर्काले ल्याएको नीति असफल बनाउने र आपसमा प्रहार गर्ने खेलमा लामो समयसम्म शर्मा र...
सरकारलाई सफल बनाउने गरी बजेट बन्दैछ, प्रधानमन्त्रीको पूर्ण साथ छ: अर्थमन्त्री
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणका लागि उद्योग बाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव लिएका छन् । मन्त्रालयको आग्रहमा बिहिबार दिउँसो महासंघ अध्यक्ष शेखर गाोल्छा र उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष...
चैत १५ अगावै अर्थमन्त्री फेरिनसक्ने, यस्तो छ देउवाको तयारी
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत १५ गतेभित्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका केही मन्त्रीहरु हेरफेर र रिक्त रहेका मन्त्रालयमा समेत नयाँ नियुक्ति गर्ने गरी प्रम देउवाले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तयारी गरेका हुन् । यो क्रममा अर्थतन्त्र नबुझेका अर्थमन्त्री जनार्दन...
डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन अर्थमन्त्रीको उर्दी
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएको भए तत्काल छोड्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको भर्चुअल विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । डिजिटल नेटवर्किङको माध्यमबाट देशको पुँजी विदेश पलायन भइरहेकोले यस्तो गैरकानुनी गतिविधि...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तः शुल्क ‘स्टिकर’को सुरक्षित मुद्रण नेपालमै गर्न निर्देशन दिएका छन् । काभ्रेको पनौतिस्थित आइटी पार्कमा जडान हुँदै गरेको सुरक्षण मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेसको बिहीबार निरीक्षण गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक स्टिकर तत्कालै उपलब्ध गराउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन्...
-जनार्दन शर्मा पुँजीगत खर्चको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त नाजुक अवस्था छ । यदि यसलाई सुधार्न सकेनौँ भने हामीले सम्पूर्ण बजेटको पुँजीगत खर्चमा छुट्याउने बजेट अत्यन्तै सानो छ । त्यो बजेट पनि हाम्रो आम्दानीबाट जुटाउन सकेका छैनौँ । तानतुन गरेर, सहयोग आदि इत्यादि गरेर पु¥याउने गरेको छ । कसरी पूँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च घटाउने...
अर्थमन्त्रीले बोली फेरे-'मैले गभर्नरसँग सल्लाह लिन मात्र फोन गरेको हुँ, केही निर्देशन दिएको होइन'
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई आफूले टेलिफोन गरी सेयर बजारमा राष्टबैंकका कारण भएको समस्या समाधान गर्न भनी आग्रह गरेको विषयमा बोली फेरेका छन् । संसोधित बजेटको विषयमा थप प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्रालयमा केहीबेरअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो बोली फेरेका हुन् । सेयर बजारको समस्या समाधानका लागि भइरहेका...